Myanmar’s democratic momentum | UNDP in Myanmar
Toily Kurbanov was appointed Country Director of UNDP in Myanmar in September 2012. He joined UNDP in 2004 and has worked in the Office of Planning and Budgeting at UNDP Headquarters in New York. Prior to his current assignment, Mr. Kurbanov was UNDP Deputy Resident Representative in Fiji, where he led UNDP’s programme and operations in nine Pacific Island countries (Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu and Vanuatu).
Follow on Twitter @ToilyKurbanov
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လအတွင်းက စာသင်ကျောင်းများတွင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်သူများအတွက် ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာမျှဝေခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးရှိ ကျောင်းပေါင်း ၁၀၂ ကျောင်းတွင် ငလျင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့် ဟောပြောပွဲများ၊ သဏ္ဍန်တူ အဖွဲ့လိုက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းတွင်း အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုများသည် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကာ European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO) မှ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် “ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း” ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ -------------------------- After receiving TOT training on Earthquake Awareness for better preparedness and response in July, the teachers and township education officers are conducting earthquake awareness activities such as educating talk, earthquake simulation exercise in 102 schools of Sagaing Region. This school awareness activities are under "Building Resilience in Earthquake prone areas in Myanmar through better preparedness and Response Project" implementing by UNDP in collaboration with the Department of Disaster Management, with the financial support from European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO).